Google oo soo saartay App-ka la yiraahdo Meet ee ku sheekeysiga fiidiyowga boqol qof hal mar… – Hagaag.com
Posted on 5 Maajo 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Barnaamijyada App-ka farriimaha ama ku sheekeysiga fiidiyowga ayaa la arkay inuu kor u kacay taasi oo lagu sababeeyey isticmaalka sii kordhay tan iyo markii dadku waqti badan ku qaateen guryaha labadii bilood ee la soo dhaafay sababo la xiriira faafitaanka fayraska Corona, magacyada sida Zoom, Houseparty, iyo Skype waxay noqdeen kuwa isku xiray is dhexgalka bulshadeed ee xaddidan.
Google dhowaan waxay ku biirtay shirkadahan iyaga oo ka dhigaya adeegga gaarka ah ee Google Meet inuu heli karo qof walba lacag la’aan, haddii qofku leeyahay Account Google ah.
Waa maxay Google Meet?
Waa barnaamijka wadahadalka fiidiyowga ee khaaska u ah Google, qaarna waxay u yaqaaniin “Google Hang Out Meet” inkasta oo ay ka jabtay “Hang Out” waqti hore.
“Laga bilaabo bilowga bishan Maajo, qof kasta oo leh cinwaanka email-ka wuxuu iska qori karaa barnaamijka App-ka Meet oo wuxuu ku raaxeysan karaa qaabab badan oo ay ku heli karaan isticmaaleyaasha dhinacyada ganacsiga iyo waxbarashada,” Google ayaa sidaas tiri.
Markii ugu horreysay, isticmaaleyaasha Meet ayaa waxay awood u yeelan doonaan inay abuuraan oo ay martigeliyaan shirar illaa 100 qof ah (waxaa shardi u ah oo keliya inay leeyihiin Account Google ah) si lacag la’aan ah, wicitaannaduna badanaa waxay ku xadidan yihiin lixdan daqiiqadood.
Sida laga soo xigtay Google, Meet wuxuu martigaliyaa saddex bilyan oo daqiiqo oo kulammo fiidiyoow ah, wuxuu ku daray in ku dhawaad ​​seddex milyan oo isticmaaleyaal cusub maalin kasta ku soo hirta, tirada kaqeybgaleyaasha kulanka maalinlaha ah ee barnaamijka App-ka Meet ayaa gaaray dhawaan in ka badan 100 milyan.
Sideen u isticmaali karaa?
Awoodda oo dhan ee wicitaanada fiidiyowga ee loo maro GoogleMeet waxaa lagu sameeyaa browser-kaaga webka ee hadda jira ee aad heysato, taas oo micnaheedu yahay ma jiro barnaamijyo ama App dheeri ah aad soo degsaneysid si aad uga shaqeysiiso.
Marka laga reebo faa’iidooyinka logistical-ka ah, Google ayaa leh habkeeda browser-ka waa habka ugu amniga badan ee shirarka fiidiyowga lagu qaban karo, sidaa darteed haddii aad leedahay Account Google oo jira (tusaale ahaan, haddii aad tahay isticmaale Gmail), gal bogga “meet.google.com” si aad u bilowdo.
Haddii aadan laheyn Account Google bilaash ah, waxay kugu qaadan kartaa daqiiqad si aad u abuuratid Account adigoo adeegsanaya meheradaada ama cinwaankaaga email-ka ee khaaska ah ee aad dooratay (Google ayaa waxay u qaadeysaa talaabadani xaalad amni, oo waxaad u baahan tahay oo keliya inaad hal mar sameysatid).
Haddii sidoo kale aad rabto inaad isticmaashid telefoonkaaga ama Tablet-kaaga, waxaa jira App Google Meet oo loogu talagalay oo aad ka soo degsan kartid Play store-ada ama dukaamada Apple iyo Google.